नेपालमा भेटियोको अनौठो घर, जुन घरको नजिकै भएर हिंड्दा नि हुन्छ डर, के हो त वास्तविकता ? - ramechhapkhabar.com
नेपालमा भेटियोको अनौठो घर, जुन घरको नजिकै भएर हिंड्दा नि हुन्छ डर, के हो त वास्तविकता ?
बर्दिबास नगरपालिका–१४ स्थित सुभम बस्तीमा जाने गल्लीको अली पर पुगेपछि दायाँतर्फ देखिने एउटा भव्य घरले जोकोहीलाई झसङ्ग बनाउँछ । घर नजिकै गएपछि भित्र खरानी नै खरानी छ । मानाैँ यो मुर्धाघर हो, जहाँ दाहसंस्कारको लागि यही घरलाई प्रयोग गरिन्छ । अगाडिपट्टी दुईवटा सटर छन् । सटरभित्र जलेका बोतल र सिसाहरू देखिन्छन् । दिउँसै अँध्यारो र भग्नावशेष देखिने यो घर किन यति डरलाग्दो छ ? बस्तीको बीचमा पनि यो घरले वरपरका मानिसलाई त्रसित बनाइरहेको ? यो घरबाट आवतजावत गर्ने जोकोहीमा यस्तै विभिन्न प्रश्न उब्जन्छ ।
तर, घरको दायाँबायाँ ठूला अक्षरले लेखिएको छ– यो अपराधीको घर हो । यो घर किनबेच गर्न पाइँदैन । बर्दिबास सहरको व्यस्त गल्लीमा एक्लिएको यो भव्य घर अरुण साहको हो, जसले पाँच वर्षीया बालिका गुलावसा खातुनको एक वर्षअगाडि कर णीपछि हत्या गरेको थियो ।
साह कानुनअनुसार जेलमा आजीवन सजाय भोगिरहेका छन् । साह जेल सजाय भुक्तान गरिरहँदा उनको घर, परिवार नै घृणा र आक्रोशको सिकार बनेका छन् ।
मंसिर २०७७ मा साहले पाँच वर्षीया बालिकालाई यही घरमा हत्या गरेर बोरामा हालेर बाहिर फ्याँकेका थिए । सोहीबेला स्थानीयहरूले यो घरमा आगो लगाए, साहको सम्झना हुनलायक सम्पूर्ण सामानहरू ध्वस्त बनाइदिए । त्यसपछि यो घर रित्तो बन्यो ।
करिब १० धुर जग्गामा बनेको यो घरको अगाडि र पछाडि अपराधीको घर हो भनेर लेखेको देखेपछि साहसँगै यो घरले पनि उस्तै सजाय भोगिरहेको छ । साहको अपराधको कारण उनको परिवारका सदस्यसमेत विस्थापित भएका छन् । घरको प्रत्येक तल्लामा स्थानीयहरूले आगजानी गरेको खरानीका थुप्रोबाहेक केही छैन । साहले घरमा किराना पसल राखेका थिए ।
सोही पसलमा चक्लेट किन्न गएकी बालिका गुलावसा खातुन एक्कासि हराएकी थिइन् । हराएको तीन दिनपछि घरनजिकै मृत अवस्थामा भेटिएको केही घण्टामा नै प्रहरी हिरासतमा आफैँले हत्या गरेको उनसले स्वीकारेका थिए ।
अपराध गर्ने जोकोहीले कानुनको भागीदार मात्र हैन सामाजिक आक्रोश र सामाजिक सजायको पनि भागीदार बन्नुपर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, यो घर । समाजको आक्रोश यसरी स्थापित भयो कि मानौँ साहको सम्पती, जग्गाजमिन, परिवार, सम्पुर्ण साहलाई अपराधमा उत्प्रेरित गर्ने तत्वहरू हुन् । अपराधीलाई समाजले नै सजाय दिन पाउनुपर्ने भन्दै एक वर्षअगाडि बर्दिबास रणभूमिमा परिणत भएको थियो ।